version 0.2.9 – bug ပြင်ဆင်ခြင်း
ဇူလိုင်လ 21, 2009 အားဖြင့် ကမ်းလှမ်းမှုaComment Leave
ပြီးခဲ့သည့်ရက်အနည်းငယ်ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများအားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြအချို့ bug တွေကြောင့် fix လုပ်ဖို့သုံးခဲ့ကြ. အပြည့်အဝခရက်ဒစ်ပြောင်းလဲမှုမှတ်တမ်းပေး. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလူတိုင်းအဘို့ဤဆော့ဖ်ဝဲကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသည်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာ bug တွေကြောင့်အစီရင်ခံသောသူသည်လူတိုင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်.
ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီနိုင်ရန်အတွက်သင်နှင့် unturned မရှိကျောက်ခဲတို့ကိုထားခဲ့ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ် supporting ပျော်မွေ့, ကျွန်တော်တို့ကိုမဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရ, ကျွန်တော်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကာလအတွင်းပြန်လျှောက်ကြပြီမဟုတ်လျှင် – ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ရုံကိုဆက်သွယ်ပါ!
ငါတို့သည်လည်းလှူဒါန်းမှုများကို ပတ်သက်. မေးမြန်းခဲ့ကြ (နှစ်ကြိမ်ယခုသီတင်းပတ်). ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံး – ဤအချက်မှာကျမတို့ကလည်းဘယ်ပိုက်ဆံလှူဒါန်းမှုများကိုလက်မခံကြဘူး (ငါတို့သည်သင်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်များသဘောပေါက်နားလည်ပေမယ့်) ငါတို့မူကား, လှူဒါန်းမှုများကိုအနည်းငယ်အခြားပုံစံများကိုလက်ခံရန်ပြုပါ. bug ကိုအစီရင်ခံစာများကိုပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်လှူဒါန်းခြင်း (ပင်ပိုကောင်း, patches 😉 ) , သင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်များသို့မဟုတ်အကြိုက်ဆုံးဖိုရမ်များအတွက်တစ်ခုခုရေးဒီ plugin ပတ်သက်. အသိပညာဖြန့်, ထို wordpress plugin directory ထဲတွင်ဒီ plugin ကိုအဘို့အမဲကလူတွေပိုပြီးနောက်ဆုံးတော့အသုံးပြုရန်မည်ဒါကြောင့် – သင်အမြဲသင်၏အမိ-လျှာကိုရန်ဤ site ကိုစစ်ဆေးပြီးဘာသာပြန်ဆိုခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်.
အောက်တွင်တင်သွင်း: သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာချက်များ အတူ Tagged: bugfixes ပြင်ဆင်မှုများ, လှူဒါန်းမှုများကို, အသေးအဖွဲ, လွှတ်ပေး, wordpress မှာ plugin
တစ်စာပြန်ရန် Leave ပြန်ကြားချက် Cancel
သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာထုတ်ဝေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ. လိုအပ်သောလယ်​​ကွင်းမှတ်သားနေကြသည် *
လက်ရှိသင်တို့သည် @ r ကို *